नेपाल र रावलपछि ओलीले गरे पाण्डे र भुसाललाई निलम्बन « Rara Pati
नेपाल र रावलपछि ओलीले गरे पाण्डे र भुसाललाई निलम्बन
२० चैत, काठमाडौं । देश, जनता र पार्टीविरुद्ध आपराधिक गतिविधि गरेको अभियोगमा सोमबार वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई निलम्बन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तीन दिनमै अरू दुई नेतामाथि पनि कारबाही गरेका छन् ।
उनले बिहीबार स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन गरेका छन् । भुसाल र पाण्डेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ओलीले दुवैलाई बिहीबार निलम्बनको कारबाही गरेका हुन् ।
ओली समूहका केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकले भुसाल, पाण्डेसहित वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई ८ चैतमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेपाल र रावलले १२ चैतमा प्रतिस्पष्टीकरणसहित जवाफ बुझाएका थिए । नेता नेपाल र रावललाई ओलीले १७ चैतमा पार्टी सदस्यताबाट ६ महिना निलम्बनसहितको कारबाही गरेका छन् ।
तर, पहिलोपटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा पाण्डे र भुसालले जवाफ नदिएको भन्दै १६ चैतमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएकोमा १७ चैतमा उनीहरूले प्रतिस्पष्टीकरणसहित जवाफ फर्काएका थिए ।
अहिलेकै गतिविधि जारी रहेको खण्डमा थप कडा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिँदै ओलीले पत्रमा दुवैलाई सच्चिनका लागि अन्तिम मौका दिइएको जनाएका छन् ।
‘एकैपटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई पार्टीको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारीहरू ९प्रतिनिधिसभा सदस्यताबाहेक० तथा पार्टी सदस्यबाटै हाललाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ,’ कारबाहीको पत्रमा छ ।
किन रोकियो एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच हुने गोप्य भेट ?
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)बीच गत हप्ताको
मन्त्री पद जाने बित्तिकै एमाले पार्टी प्रवेश गर्नेे मन्त्री आलेको तयारी !
काठमाडौं । एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री मन्त्री बनेका प्रेम आले मन्त्री
जुम्ला पुगेर विप्लवले भने- कम्युनिस्ट एकता हुनसक्छ
जुम्ला । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपालका कम्युनिस्ट दलसँग एकता हुन सक्ने